के ब्रह्माण्डको रहस्य सुल्झिएला? | The Republic Indian
Home साप्ताहिक विशेष के ब्रह्माण्डको रहस्य सुल्झिएला?
के ब्रह्माण्डको रहस्य सुल्झिएला?
ब्रह्माण्ड के हो? यसो शुरु कहाँबाट र अन्त कहाँसम्म छ? ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कहिले अनि कसरी भयो? ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको शुरुवाती क्षणहरूमा के के भएको थियो? ब्रह्माण्ड बारे हजारौँ लाखौं प्रश्नहरु युगदेखि युगसम्म उठिरहेको रहेको छ अनि युगपछि युगसम्म पनि उठिरहने छ। आखिर ब्रह्माण्डको बारेमा जान्ने जिज्ञासा कसलाई हुँदैन र? यस बारेमा वैज्ञानिक हरुको निरन्तर खोजी अन्तहीन बनेको छ। साँचो कुरा के हो भने, यसबारे हामी जान्दैनौँ, कारण प्रयोगशाला मा यति छोटो समयमा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे बुझाउन निकै ऊर्जा र सटिकता आवश्यक पर्छ। ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका विषयमा थुप्रै खोज भइसकेका छन्। तर, ती अपर्याप्त छन्। यही तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै स्टिजरल्यान्डस्थित सर्न (युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च) का लार्ज हेड्रोन कोलाइडर (एलएचसी) का वैज्ञानिकहरू यो रहस्य पत्ता लगाउने प्रयासमा जुटेका छन्।
एलएचसिबीको प्रयोगले दुई कणहरूबीचको पदार्थमा सबैभन्दा कम अन्तरमध्ये एकलाई नापेको छ, यसले हामीलाई हाम्रो ब्रह्माण्डको रहस्यमय उत्पत्तिबारे थप जानकारी हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। कण भौतिकी (फिजिक्स) को मोडल (स्टान्डर्ड मोडल) ले ब्रह्माण्ड लाई बनाउने मूलभूत कणहरू र त्यसका बीचमा कार्य गर्ने बल (फोर्स) को बारेमा जानकारी दिन्छ। यी प्राथमिक कणहरूमा ‘क्वार्क’ सामेल छ। क्वार्कका ६ प्रकार हुन्छन्- अप, डाउन, स्ट्रेन्ज, चार्म, टप र बटम। यही ६ ‘लेप्टोन’ हुन्, जसमा इलेक्ट्रोन, म्युअन र टाउ सामेल छन्। सबै क्वार्क र लेप्टोनको ‘एन्टिम्याटर (प्रतिपदार्थ) पार्टनर’ पनि हुन्छन्।
१३.८ अर्ब वर्ष पुरानो भयो ब्रह्माण्ड:
मानक मोडललाई अविश्वसनीय सटिकताका लागि प्रयोगात्मक रूपमा सत्यापित गरिएको छ। तर, यसमा केही महत्त्वपूर्ण अभावहरू भने छन्। बिग ब्याङको सिद्धान्तअनुसार १३.८ अर्ब वर्षअघि ब्रह्माण्डको निर्माण भएको थियो। बिग ब्याङ सिद्धा- न्तले यो घटनाक्रमबाट पदार्थ र प्रति पदार्थ समान मात्रामा उत्पन्न हुनुपर्ने बताउँछ। यसका अतिरिक्त आज, ब्रह्माण्ड लग- भग पूर्ण रूपमा पदार्थबाट बन्न पुगेको छ र यो राम्रो कुरा हो, किनकि प्रतिपदार्थ र पदार्थ जब मिल्छ तब एकै क्षणमा विनाश गरिदिन्छ। भौतिकीको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमध्ये एक प्रश्न यो हो कि, प्रतिपदार्थको तुलनामा पदार्थ अधिक किन छ? के ब्रह्मा- ण्डको उत्पत्तिको शुरुवातमा यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको थियो जुन प्रतिपदार्थको सट्टा पदार्थका लागि अधिक अनुकूल थियो? यसको उत्तर खोज्नका लागि एलएचसीका वैज्ञानिकहरू ले एक प्रक्रियाको अध्ययन गरेका छन्। त्यस अध्ययनमा पदार्थ प्रति पदार्थमा परिवर्तन हुन्छ र प्रतिपदार्थ पदार्थमा परिवर्तन हुन्छ। क्वार्क आपसमा जोडिएर बेरियोन नामक कण बन्छ, जसमा प्रोटोन र न्युट्रोन सामेल छ र यो परमाणु न्युक्लियस (नाभिक) ले बनाउँछ। साथै, क्वार्क र एन्टिक्वार्क मिलेर मेसोन बन्छ। शून्य विद्युत् आवेशयुक्त मेसोन मिश्रण नामक एक घटनाक्रम बाट गुज्रन्छ र यसैका आधारमा त्यो अनायासै प्रतिपदार्थ कण मा परिवर्तन हुन्छ। यो प्रक्रियामा क्वार्क एन्टिक्वार्क र एन्टि- क्वार्क क्वार्कमा परिवर्तन हुन्छ। यसले क्वान्टम मेकानिक्सका कारण यो काम गर्नसक्छ।
ब्रह्माण्ड उत्पत्ति पत्ता लगाउन सटिक मापन:
यो मेकानिक्सले ब्रह्मान्डलाई सबैभन्दा सानो परिमाणमा निय- न्त्रण गर्छ। यो सिद्धान्तअनुसार कण अनिवार्य रुपमा कयौं अलग-अलग कणहरूसँगको मिश्रणबाट एकै समयमा कयौं अलग-अलग स्वरुप बन्नसक्छ। यो विशेषतालाई सुपरपोजिसन भनिन्छ। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति बारे पत्ता लगाउन सटिक मापन अत्यावश्यक छ। ब्रह्माण्डले पदार्थको तुलनामा कममात्रै प्रति- पदार्थ उत्पादन गरेको छ। यो थाहा पाउन हामीले दुवैथरि उत्पादनको विषमताबारे अधिक जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ। केही अस्थिर कण आफ्नो सम्बन्धित प्रतिपदार्थ कणको तुलनामा भिन्नै तरिकाले नष्ट हुन्छ। यही कारण हुनसक्छ ब्रह्माण्डमा पदार्थ अत्यधिक मात्रामा छ।
लामो समयसम्म बन्द रहेपछि एलएचसी आउँदो वर्षदेखि शुरु हुँदैछ र उन्नत नयाँ एलएचसिबी डिटेक्टर मापनको संवदेन- शीलता बुझेर अधिक आँकडा एकत्रित गर्नेछ। यसबीच, सैद्धान्तिक भौतिक वैज्ञानिक यो परिणामको व्याख्या गर्नका लागि नयाँ गणनामा काम गरिरहेका छन्। हामी ब्रह्माण्डको रहस्यहरूबारे अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन सकि- रहेका छैनौं। तर, नयाँ उन्नत एलएचसिबी डिटेक्टरले सटिक मापनको ढोका खोल्ने छ र अज्ञात घटनाहरू पत्ता लगाउने क्षमता राख्नेछ।
Previous articleबाइडेन र पुटिन माझ टेलिफोनमा कुराकानी
Next articleकोपा अमेरिकाः मेस्सीको सपना साकार
दिमागलाई तेज बनाउने गतिविधि
४ अगस्त २०२१: दिमागको क्षमता बढाउनका लागि दिमागलाई हरेक क्षण बिजनेश दिइरहनु पर्दछ। मानसिक गतिविधिहरुले दिमागको क्षमता बढाउँदछ। यसले सुन्ने क्षमता र...
तीस हजारबाट शुरु गर्ने वाउ मोमोका विनोद हुमागाई
Reporter - August 3, 2021 1
३ अगस्त २०२१: केवल ३० हजार रुपियाँबाट शुरु गरेको व्या- पार अहिले ३ सय ५० करोड़ वार्षिक टर्नओभर पुगेको छ।
बर्मेली फुटबल इतिहासमा ‘बहादुर’ गोर्खाको कथा